openSUSE 13.2 ရရှိနိုင် + Post-installation လမ်းညွှန် | Linux မှ
openSUSE 13.2 ရရှိနိုင် + Post-installation လမ်းညွှန် !!!
ချစ်တယ် | | ဖြန့်ဝေ
ခဏလေးအကြာက openSUSE အဖွဲ့ကနောက်ဆုံးပေါ်တည်ငြိမ်သော version ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် openSUSE 13.2.
1 OpenSUSE 13.2 အင်္ဂါရပ်များ:
OpenSUSE 13.2 အင်္ဂါရပ်များ:
openSUSE 13.2 သည် ...
ဤ post တွင်စမ်းသပ်မှုများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ openQA အလိုအလျောက်စမ်းသပ်ခြင်းကိရိယာ၏တိုးတက်မှုနှင့်အတူနောက်ဆုံးရလဒ်သည်မနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့အားသင့်စရာများမရှိကြောင်းသေချာစေသည်။
Btrfs file system သည် root အခန်းကန့်၏ default file system နှင့် / home partition အတွက် XFS ဖြစ်သည်။ Linux 3.16 kernel သည်မတူညီသောဟာ့ဒ်ဝဲများ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်အသိအမှတ်ပြုမှုတို့ကိုတိုးတက်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ YaST အရင်းအမြစ်သည် Ruby သို့ပို့ဆောင်ခံရပြီးမှရင့်ကျက်လာသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်ကိရိယာများတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုသည့်ဘာသာစကားဖြစ်သည်။
ဒီဖြန့်ချိမှုမှာ AppArmor 2.9 နဲ့အတူပါ ၀ င်ပြီး AppArmor မှာပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရပြီးပိုမိုလုံခြုံတဲ့ပရိုဖိုင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးပါတယ်။ Samba၊ AutoYaST နှင့်အခြားအရာများစွာတို့ကဲ့သို့သောအခြားကွန်ယက်ကိရိယာများအတွက်အခြားအသစ်ပြောင်းထားသော package များလည်းရှိသည်။
openSUSE 13.2 တွင် GCC 4.8 နှင့် GCC 4.9, Qt 5.3 အသစ်ကိုထည့်သွင်းရန်အတွက်ရွေးစရာရှိသည်။ သင့်တွင် KDE5 အသစ် (ထပ်မံ၍ တည်ဆောက်ဆဲ) ကိုထည့်သွင်းရန်သင့်တွင်ရွေးချယ်စရာရှိသည်။
ယခုဖြန့်ချိရာတွင် Ruby ဘာသာစကားသို့ဘာသာပြန်ထားသော“ YaST” အသစ်သည်၎င်း၏ codebase သည် Yast မှသင်မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်းထက်ပိုပြီးကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသောအထိရင့်ကျက်လာသည်။ ActiveDoc သည် Linux ၏ကမ္ဘာတွင်သင်အနှေးနှင့်အမြန်တွေ့ရှိရမည့်ကိရိယာအမျိုးမျိုးအတွက်စာရွက်စာတမ်းများကိုရှာဖွေရန်နေရာဖြစ်သည်။ Version 13.2 သည် desktop ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည့် KDE 4.14 ကိုလည်းကမ်းလှမ်းသည်။ KDE သည် Plasma5ကိုဆက်လက်တီထွင်နေစဉ် GNOME တွင် ၄ င်း၏ဗားရှင်း ၃.၁၄ ကိုသင်ခံစားနိုင်သည်။ LXDE ကိုယခုဖြန့်ချိမှုအတွက်အသစ်ပြင်ဆင်ထားသည့် package များ၊ အမြင်အာရုံတိုးတက်မှုများနှင့်အမှားပြင်ဆင်ချက်များစွာတို့ဖြင့်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။
Linux 3.16 တွင် nouveau၊ NVIDIA ကဒ်များအတွက် open source driver နှင့် Intel နှင့် AMD မှဂရပ်ဖစ်အတွက်စွမ်းဆောင်ချက်များစွာပါရှိသည်။ ယခု kernel အသစ်သည် Btrfs နှင့် XFS တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည်။
ယခု KDE သည်သင်၏မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များကို kdeconnect package မှတဆင့်ပေါင်းစပ်ရန်ထောက်ပံ့မှုပေးသည်။ root အခန်းကန့်အတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်သတ်မှတ်ထားသည့် Btrfs ဖိုင်စနစ်အသစ်သည်သင်စိတ်ကူးဖူးသည်ထက်ပိုပြီးစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များရရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ YaST သည်လည်း Qt5 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော Qt interface အသစ်လည်းပါ ၀ င်သည်။
ယခုထုတ်လွှတ်မှုအသစ်တွင်သင်စမ်းသုံးနိုင်သည့်စမ်းသပ်မှုနည်းပညာအသစ်များရရှိနိုင်သည်။ ဥပမာ Wayland 1.4, KDE Frameworks 5၊ Build Service မှနောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဝဲလ်နှင့်ဖြန့်ဖြူးသောအခင်းအကျင်းအတွက်အရောင်အသစ်တို့ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ် OpenSUSE နှင့် Gnome ၏ပုံအချို့
oprnSUSE ကို download လုပ်ပါ
system ကို install လုပ်ပြီးတာနဲ့၊ terminal ကိုဖွင့်ပြီးဆက်ရိုက်ပါမယ်။
su (ငါတို့သည် superuser စကားဝှက်ကိုမိတ်ဆက်) zypper up zypper ကို install-new- အကြံပြုချက်များ
Packman repository ကို (အကြံပြုသည်):
zypper ar -f -packman-essentials http://packman.inode.at/suse/openSUSE_13.2/Essentials/ packman-essentials zypper ar -f -n packman-multimedia http://packman.inode.at/suse /openSUSE_13.2/Multimedia/ packman-multimedia
zypper up zypper ထည့်သွင်းပါ
zypper ကို install vlc vlc-codecs fetchmsttfonts rar unrar htop nano mc filezilla MozillaThunderbird zypper up zypper ထည့်သွင်း - အသစ် - အကြံပြု
ကျွန်ုပ်တို့သည် compile လုပ်ရန်နိမ့်ကျသော package များတပ်ဆင်ခြင်းကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။
ထိုအ voila ... သင်၏ openSUSE 13.2 အဆင်သင့်ရှိသည်။
linuxeros မှနှုတ်ခွန်းဆက်သည် :) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » openSUSE 13.2 ရရှိနိုင် + Post-installation လမ်းညွှန် !!!
96 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ယောက်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ပြေးနေသော application ရဲ့ icon ကိုဖုံးကွယ်ထားသည့် extension ကို၊ အထက်ဘားတွင်ပေါ်လာသောတစုံတ ဦး ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ ကျွန်ုပ်အားမူလက os luna ကိုသိမ်းပိုက်ခြင်းမှထွက်လာပြီးကျွန်ုပ်သည်ပြောင်းလဲခြင်းခံခဲ့ရသောကွန်ပျူတာစနစ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသစ်ကငါ့ကို elementary OS ကို install မလုပ်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ ubuntu gnome 14.04.1 နဲ့အတူရှိနေတယ်
သူတို့ဟာ Suse hahaha ကိုရောင်းနေပုံရပါတယ်ဒါပေမယ့်အရမ်းကောင်းတဲ့ distro တစ်ခုပါ
ငါမရောင်းဘူး .. ဒါကအရမ်းကောင်းပါတယ်။
မကြာသေးမီက OpenSuse သည်တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါ Debian ကိုမထွက်နိုင်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ startd မှာ systemd နှင့်အတူမည်သည့်အခြား distro မဆိုကျပန်းရပ်တန့်သွားလို့ပဲ။ အမှန်တရားကတော့ဒေဗန်စမ်းသပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် FreeBSD နှင့် Slackware များကိုလည်းအသုံးပြုသည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်တစ်နေ့တာ၏အသစ်ပြောင်းခြင်းပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားသောအရာများကိုပြန်လည်တပ်ဆင်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Debian အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး FreeBSD နှင့် Slackware အပါအ ၀ င်အခြားသူများစွာသွားပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည် SUSE ကမ္ဘာတွင်ဖြစ်သည်။ FreeBSD 10 သည်ကောင်းမွန်သော်လည်းဆာဗာများအတွက်သာကောင်းမွန်သည်။ Desktop ပေါ်တွင်မသက်မသာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည် FreeBSD ကိုနေ့စဉ် desktop ပေါ်တွင်မဟုတ်ဘဲအခြား desktop တစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ငါ GParted ကိုသာလက်လွတ်သည်။ Ext4 ရှိအခန်းကန့်များ (သို့) ပြင်ပ disk များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ပြီး Wacom အတွက်အထောက်အပံ့ပိုကောင်းသည်။ ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကကြီးတယ်။ ဒီအားနည်းချက်သုံးခုကိုကျွန်တော်မရရှိရင် Linux ကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာထားခဲ့ ဦး မှာပါ။
OpenSuse နဲ့အတူကျွန်တော်ဟာအခြားသူများစွာနဲ့အတူခဏနေ ၀ င်ပြီး login မျက်နှာပြင်ကိုရောက်ဖို့အကြိမ်ကြိမ် restart လုပ်ရတာမငြီးငွေ့ခင်အထိ။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော် FreeBSD ကို Desktop ပေါ်မှာမသက်မသာဟုခေါ်သည်။ နောက်ထပ်အရာများစွာလည်းရှိသေးသည်။ OpenSUSE တွင် ၁၂.၃ မှ စ၍ ကျွန်ုပ်၌ထူးဆန်းသောအရာမရှိပါ။ သင် login မျက်နှာပြင်ကိုရောက်ရန်ပြန်လည်စတင်ရန်လိုအပ်သည့်ပြmentionနာကိုကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမကြုံဖူးပါ။
ငါနဲ့တူညီသူရှိသလား။ : ၁၃.၁ နှင့်အတူ၊ kernel (၃.၁၁) + Firmware နှင့်ပြproblemနာကိုမပိတ်နိုင်ပါ။ ၁၃.၂ သို့ ၁၃.၂ သို့တိုးမြှင့်သောအခါတူညီသောပြ(နာ (acpi ကိုမဖွင့်နိုင်ခြင်း) နှင့်အင်တာနက် (ကွန်ယက်မန်နေဂျာ) က - ဆက်သွယ်သည်
ဟိုင်းလို၊ ဒီ package ကိုကြိုးစားပြီးစမ်းကြည့်ပါ။
kernel-firmware ကိုအတွက် zypper
ပုံစံများ - openSUSE- လက်တော့ပ်ထဲမှာ zypper
ဘာမျှမက default kernel ကို install လုပ်ဖို့ကူညီဘူးဆိုရင်။ သင်အသုံးပြုသောမည်သည့် kernel ကိုကြည့်ရန် uname -a ကို run ပါ။ Desktop ဟူသောအမည်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရပါက၊
kernel-default အတွက် zypper
အကယ်၍ ဘာမှမကူညီလျှင် vanilla kernel ကိုစမ်းသုံးနိုင်သည် (openSUSE မှပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲ kernel.org မှတိုက်ရိုက်)
kernel-vanilla အတွက် zypper
ဒါကခင်ဗျားရဲ့ကိစ္စလားဆိုတာကျွန်တော်မသိပေမယ့်ကျွန်တော့်မှာ ACPI driver မရှိဘဲထည့်သွင်းရပါမယ်၊ မတပ်ဆင်ပါဘူး၊ တပ်ဆင်လိုက်တာနဲ့ YaST2 ရှိ Bootloader Configuration ကိုသွားပြီးအလံကို ACPI = off ACPI = On သို့ပြောင်းပါ၊ ငါမပိတ်ဘူး
ဆောင်းပါးအတွက် petercheco ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ OpenSuse 13.2 သို့ upgrade အခါငါကရည်ညွှန်းပါလိမ့်မယ်။
SuSe က ၇.၃ ကနေငါ့ကိုအောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ် OS ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၀ မ်းသာပါတယ်။ D.
မည်သူမဆို Dropbox ကို opensuse 13.2 တွင်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုသိရှိပြီးကျွန်ုပ်သည် virtualbox ကို install လုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်၌ပြaနာတစ်ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ် run သောအခါတွင်ဘာမျှမလုပ်ပါ။
dropbox အတွက် zypper nautilus-dropbox
ဒါဟာ repos အတွက်လာ :) ။
virtualbox-qt အတွက် zypper
ထို့နောက် Yast ကိုဖွင့်ပြီးအသုံးပြုသူမန်နေဂျာ -> edit -> details နှင့်ညာဘက်အုပ်စုများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သူတို့တွင် vboxusers ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းကိုဖွင့်ထားရမည်။ Reboot လုပ်ပြီးသွားပါမယ်
ဆောင်းပါးကောင်းကောင်း၊ OpenSuse ကိုငါကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာသစ်ကြံပိုးမှကင်းဝေးအောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး၊ oSUSE 13.2 မှာဒီ desktop နဲ့သန့်ရှင်းတဲ့ install လုပ်နည်းကိုတစ်ယောက်ယောက်ကပြောနိုင်မလား။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါလမ်းညွှန်ပြန်လည်သုံးသပ်တာပါ။ 😉
zypper ar http://download.opensuse.org/repositories/X11:/Cinnamon:/Factory/openSUSE_13.2 သစ်ကြမ်းပိုး
zypper ref သစ်ကြံပိုးခေါက်
zypper -t ပုံစံသစ်ကြံပိုး
zypper -install- အသစ် - အကြံပြုသည်
သတင်းအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ရက်အနည်းငယ်စောင့်ပြီးလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ့မယ်။ 😉
ငါ nvidia 750ti ထည့်ပြီးကတည်းကဘယ် distro ကိုမှ run လို့မရဘူး။
အဘယ်သူမျှမ Boot တက်ပြီးအောင်။
Avelino De Sousa ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ OpenSUSE 13.2 တွင် Ubuntu ကဲ့သို့ "ကန့်သတ်ထားသော extras" များကိုထည့်သွင်းထားပါသလား။
Avelino De Sousa အားပြန်ပြောပါ
Packman repository နှင့် libdvdcss ကိုသက်ဝင်ပြီးသက်ဆိုင်ရာ package များကို install မလုပ်လျှင် 13.1 နှင့်အတူကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လမ်းညွှန်အတိုင်းလိုက်နာပါက၊ install ubuntu-restrict-extras ကို install လုပ်ရန်မလိုပါ။
pacman သည်ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်တွင်ဒီနေရာကိုထည့်ပြီးပြီလားကြည့်ရအောင်။ သင်ဖတ်ရန်လိုအပ်သည် ...
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ၁၃.၂ မှတွေ့ရှိချက်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိ
Excellent က distro !!! ကိုယ့်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အဘို့ကိုငါ့ PC ပေါ်မှာ install !!! အရမ်းမြန်ပြီးတည်ငြိမ်တယ် ပိုကောင်းအောင်ကြည့်ဖို့ GTK themes များနှင့် icon themes များကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ install သည်ကိုကြည့်ဖို့ကျွန်ုပ်ပျောက်နေသည်။ အာဂျင်တီးနားမှကျေးဇူးတင်ပါတယ် မာရီယို။
gnome-tweak-tool ကိုအတွက် zypper
ဟိုင်း PeterCheco, ငါမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ သင်အရည်အသွေးကောင်းသည့်သင်အသုံးပြုသောဤနောက်ခံပုံကိုမည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ် download လုပ်နိုင်သည်ကိုပြောပြပါ။ ငါအရမ်းသဘောကျတယ် (အခုတော့ openSUSE ကိုသုံးတာမဟုတ်ပေမယ့် LMDE) ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Košiceမှသင့်ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ 😉
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း ... ကျွန်တော့်အမေနဲ့စလိုဗက်ကီးယားမှာဘာလုပ်နေလဲ။
မင်္ဂလာပါ၊ နောက်ခံပုံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ 🙂
ငါဒီမှာငါတတ်နိုင်သမျှအားလုံးလုပ်ပါ။ ငါလည်းအသက်ရှင်တယ်၊ လေ့လာသင်ယူတယ်။ 😀
Madreeee … :) သို့သော်သင်သည်ဟစ်စပန်းနစ်သို့မဟုတ်စလိုဗက်စကားလား၊ အကယ်၍ ချက်နှင့်ဆလိုဗက်တို့ကတစ်ခုတည်းအရည်ပျော်သွားလျှင် - D. ။ ပြီးတော့ C လည်း ...
ကျွန်တော်ဗင်နီဇွဲလားမှပါ Ale viem aj slovenskýpsať, hovoriť။ 😛
ကျေးဇူးပြု! Ubuntu မှ opensuse 13.2 ကို သုံး၍ bootable usb တစ်ခုမည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။ ငါ multisystem ဖြင့်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ၎င်းကိုလက်မခံပါ။ ကျွန်ုပ်သည် Unetbootin နှင့်ကြိုးစားခဲ့သည် ......... ။ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ps: ငါ bootuse usb ကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ opensuse စာမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့အဲဒါကငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး။
ကြည့်ပါ၊ "dd" command ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
သင်၏ usb GParted နှင့်သို့မဟုတ်သင်လိုချင်သောဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ပါသောအခန်းကန့်အားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပါ။
# dd if = » path / to / opensuse.iso »၏ = / dev / sdX
သင်သတိပြုမိသည့်အတိုင်း၎င်းကို root အဖြစ် run ရမည်။ သင်၏ iso လမ်းကြောင်းသည်နေရာများမပါရှိဘဲကွင်းပြင်များမပါဘဲသွားရမည် (သင်နေရာလွတ်များတွင် backslashes ကိုသုံးနိုင်သည်) ။ သင်၏ usb လမ်းကြောင်းသို့ X စနစ်ကိုပြောင်းပါ။ သင့်ကိုသင်၏ usb (sudo fdisk -l ဖြင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်) သတိထားပါ၊ မည်သည့်အခန်းကန့်ကိုမှမဖော်ပြသင့်၊ ဆိုလိုသည်မှာ sdX ကိုသာထားရမည်၊ sdX1 သို့မဟုတ် sdX2 စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းကိုပြီးဆုံးရန်သင်စောင့်နေသည် (နှောင့်နှေးခြင်းသည် ISO အရွယ်အစားနှင့်သင်၏ usb ၏အမြန်နှုန်းနှင့်အချိုးကျလိမ့်မည်။ )
သင်ထိုနေရာမှ boot လုပ်သင့်သည်။
မင်္ဂလာပါ၊ Imagewriter သွင်းပါ။ ၎င်းသည် Bootable USB ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ sudo apt-get install usb-imagewriter ။
dd if = la_iso_opensuse.iso of = / dev / sdb (သို့မဟုတ်သင်၏ usb နှင့်ကိုက်ညီသောအခြားစာတစ်စောင်)
ကျွန်ုပ်၏ Epson Stylus Photo R265 ပရင်တာကိုဤ distro ဖြင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ Epson download စာမျက်နှာမှယာဉ်မောင်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းနှင့်တပ်ဆင်နေစဉ်အတွင်းချိတ်ဆက်ထားခြင်းကိုပင်အဘယ်ကြောင့်မလုပ်နိုင်ပါသနည်း။ ကျနော့်အမြင်အရဒီပုံနှိပ်စက်ဟာဒီ operating system နဲ့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း၊ ဤ post ကိုဖတ်ရှုသောအခါသင် openuse gnome ကိုသုံးသည်ကိုတွေ့ရပြီး packman repos နှင့် codecs အမြောက်အများကိုတပ်ဆင်ထားသော်လည်း၊ Totem နှင့် rhythmbox တို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုပြgivingနာများဆက်လက်ပေးနေသော်လည်းမာလ်တီမီဒီယာအထောက်အပံ့နှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုသိလိုသည်။ multimedia files အချို့ကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင် gnome-mplayer လိုမျိုးအခြားရွေးစရာများကိုကျွန်တော်ပိုနှစ်သက်တယ်။ မလုပ်နိုင်ရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲ။
ဒီ command ကိုရိုက်ထည့်နှင့် codecs ကို install:
zypper ကိုထည့်သွင်း libxine2-codecs k3b-codecs ffmpeg lame gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-ugly-orig-addon gstreamer-plugins-libav libdvdcss2
ကျွန်ုပ်သည် Packman Repositories ကိုမထည့်သွင်းပါကဘာကိုသတိမထားမိပါသနည်း။
ဤအရာများပြီးနောက်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ် 200 အကြံပြုသောအစီအစဉ်များ၊ ထို့နောက်ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်အထုပ် ၃၀၀ နှင့်နောက်ဆုံးတွင် totem သည် .mkv .mp300 .wmv .4gp စသည်တို့စသည်တို့ကိုမကစားနိုင်ဘဲ vlc တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးမရှိပါ
OpenSuse အဖွဲ့သည် Firefox နှင့် Thunderbird ၏ ၂၅ စက္ကန့်ကိုဖွင့်ထားသည့်နှောင့်နှေးမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါမည်လား။
Geraldo rivera ဟုသူကပြောသည်
gore ကို LibreOfficeTurno.sh ဖိုင်ကို google မှာရှာဖွေပြီးဖွင့်ပါ၊ ၎င်းဟာ runtime ပြ,နာ၊ libreoffice, firefox, thunderbird စသဖြင့်ဖယ်ရှားပေးလိမ့်မယ်။
Geraldo Rivera အားပြန်ကြားပါ
အခြားဖြန့်ဝေမှုများအားလုံး၌၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက် OpenSuse တွင်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည် OpenSuse ဗားရှင်းများစွာအတွက်အဖြေမရခဲ့သည့်ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်အများဆုံးသုံးသောအသုံးအဆောင်သုံးမျိုး (Firefox, thunderbird နှင့် libreoffice) နှင့်သာသက်ဆိုင်သည်။
Yast ကိုဖွင့်ပြီး network connection ကိုသွားပါ။ အတွင်းပိုင်းရှိ tabs များကို DNS နှင့် system name သို့သွားပါ။ အဲဒီမှာ PC name section ကိုတွေ့ပြီး hostname အောက်မှာ Set hostname to ip (loopback) ကိုနှိပ်ပါ။
Firefox ရော Yast နှစ်ခုလုံးမှာ IPV6 ကို disable လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာမင်းရဲ့ message ကိုမြင်ပြီးအလင်းကိုမြင်ရတဲ့အခါ
ကြီးမြတ်သောလမ်းညွှန်၊ ဤအံ့သြဖွယ်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုသင်အမြဲပံ့ပိုးပေးသည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ၊ ကျွန်ုပ်သည်“ PackageKit” အထုပ်ကိုထည့်သွင်းသည့်အချိန်မှဖယ်ရှားခြင်း (နှင့် TABU ထဲသို့ထည့်ခြင်း) ကိုပိုနှစ်သက်သည်၊
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်အရ, အရာများတပ်ဆင်ရန်, zypper သည်လုံလောက်ပြီး၎င်းတွင်များစွာရှိသည် (သင် graphical interface ကိုအသုံးပြုလိုပါက Yast2) ။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအရာမှာ၎င်းသည်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောကြောင့်လူတိုင်းကသူတို့နှစ်သက်သောအရာကိုရွေးချယ်ကြသည်။ ^ _ ^
အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း ... :) သင်ပြောတာမှန်ပါတယ် Apper ထွက်နိုင်ပါတယ် မင်းလိုပဲ zypper နဲ့ yast ကိုအမြဲသုံးတယ်။
Petercheco, 13.2 က LTS လားသိလား။ သို့မဟုတ်ငါလက်ရှိ desktop ပေါ်မှာသုံးကြောင်း 13.1 သာ .. !!! !!!
ငါ့မှာ Mint kde လက်တော့ပ်ရှိပေမယ့် desktopuse 13.1 ကိုသုံးပြီးငါ 13.2 နိမိတ်အချို့ကိုဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုဒေါင်းလုပ်မလုပ်ရဲခဲ့ဘူး !! ငါအချို့သောအခြားများအတွက်လက်ပ်တော့၏ Mint ကိုပြောင်းလဲချင်သကဲ့သို့
၁၃.၁ သာလျှင်။ ဟုတ်ပါတယ် .. OpenSUSE ဗားရှင်းအားလုံးမှာနောက်လပေါင်းနှစ်လထောက်ခံမှုရပြီး ၂ လလောက်ရမယ်။
ဟေ့၊ ငါ့မှာထူးဆန်းတဲ့တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ multimedia codecs တွေအားလုံးကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးပြီ။ vlc ကတဆင့်ဗီဒီယိုမျိုးစုံကြည့်လို့ရတယ်။ mp4 မှသည် Vob အထိ။ သို့သော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ သောကြာနေ့မနက်မှာငါ command ကို root: "Zypper dup" နဲ့ပဲသုံးလိုက်တယ်။ …။ ၎င်းသည် mp18 မှကလီမန်တိုင်းမှအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် VLC ကဲ့သို့သော openSUSE ဗွီဒီယိုဆော့ဝဲလ်နှစ်ခုလုံးသည်။ အောက်ပါအမှားကိုကျွန်တော်ရတယ်
VLC သည် "h264" ဗွီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံပုံစံကိုမထောက်ပံ့ပါ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။
သင့်လျော်သောဒီကုဒ်ဒါ module မပါပဲ
VLC သည် "mp4a" အသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုပုံစံကိုမထောက်ပံ့ပါ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းကိုပြင်ဆင်ရန်နည်းလမ်းမရှိချေ။
တကယ်ပတ်ပတ်လည် fuck ဆိုတဲ့မထားဘူး .... ဦး
jojojo, ငါအရာအားလုံးကိုထပ်လုပ်တယ်။ ငါဆိုလိုတာက၊ ငါအရင်လုပ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒီဘလော့ဂ်ကိုမကြည့်ခင်၊ သင်ထားခဲ့တာတွေကိုငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်၊ ; -; : အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တစ် ဦး တွှေ "v ။
ငါဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး usb မှ opensuse bootable ကိုစဖွင့်ရန်ကြိုးစားခဲ့သောကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအတွက်ဝမ်းနည်းပါသည်။ windows အတွက် linuxlive usb ဖန်တီးသူနှင့် linux အတွက် unetbootin သည် opensuse iso သာလျှင်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ..
မင်္ဂလာပါ၊ rufus ကိုသုံးပါ၊ ကျွန်ုပ်အားလည်းခွင့်မပြုပါ။
Rufus အလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် usb ဟုတ်တယ်၊ နောက်တစ်ယောက်နဲ့တော့သူက pre-installation လုပ်နေတုန်း kernel ကို load မလုပ်ဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်းသည် Pendrive ပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။
Opensuse ကို Install လုပ်ပါ ။.13.2 ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် okular နှင့် okular closes များဖြင့် pdf တစ်ခုကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြသနာများရှိပါသလား။
နောက်ဆုံးထွက် OpenSUSE 13.2
ငါ OS ကိုမွမ်းမံပြီးဆုံး။ အစပိုင်းမှာတော့ထုံးစံအတိုင်းအရမ်းကောင်းတယ်လို့ငါထင်တယ် Boot သည် OpenSUSE 13.1 ထက်အနည်းငယ်နှေးသည်။
opensuse 13.2 ကို install လုပ်ပြီးနောက် installation usb သည်မည်သည့်ပရိုဂရမ်ကို install လုပ်ရန်သို့မဟုတ် yast မှပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန်အမြဲတောင်းဆိုသည်။ usb ၏လမ်းကြောင်းအားဆက်သွယ်မရပါ၊ ၎င်းသည် usb ၏လမ်းကြောင်းကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းပြီးအပြောင်းအလဲများလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားအမြဲတောင်းဆိုသည်၊ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။ usb ကိုအမြဲတမ်းတောင်းခံနေပါတယ်
ဟယ်လို! အကယ်၍ သင် installation medium ကိုရည်ညွှန်းသည်ဆိုပါက USB ကိုဖွင့်ပြီး၎င်းကိုပိတ်လိုက်ပါက repositories စာရင်းကိုကြည့်ပါ။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ပါပဲ။ Yast တွင်သင် repositories သို့သွားပြီးသင်၏ USB သို့မဟုတ် DVD ကိုရည်ညွှန်းသော repo ကိုပိတ်ထားသည်။
သိုလှောင်ရုံနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ ??? အချို့ကို disable လုပ်ပါ။
dvd repository ကို openSUSE-13.2-0 လို့ခေါ်တယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် suse 13.2 ကို install လုပ်ပြီးပြီ။ အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါသည်။ ကျွန်ုပ် usb ports များကိုမမှတ်မိတော့ပါ။ wifi connection အတွက်ကပ်ထားသောကလစ်တစ်ချက် နှိပ်၍ မရပါ။
PAE ပါသော 64-bit သို့မဟုတ် 32-bit processor ရှိလျှင် Kernel Desktop ကိုသွင်းပါ။
သင်၏ပရိုဆက်ဆာသည် PAE ကိုပံ့ပိုးမှုရှိမရှိသိရှိရန်:
ကြောင် / proc / cpuinfo
အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာ yast2-> System -> / etc / sysconfig ကိုတည်းဖြတ်ပြီး INITRD_MODULES နှင့် MODULES_LOADED_ON_BOOT တွင် xhci_hcd ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ဟိုင်းပေတရု၊ ငါ Kernel Desktop ကို install လုပ်ပြီးပြီ။ ကွန်ပျူတာကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်။ ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးငါမသိဘူး။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကျွန်ုပ်သည်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုကိုအသုံးပြုလို။ မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။
ကောင်းပြီ, ဒီလိုက်တယ် ... ဤသူသည်ငါ၌ဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှမ။ BIOS သို့မဟုတ် UEFI တွင်သင်၏ USB port များဖွင့်ထားကြောင်းပြသပါကပြproblemsနာမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ပါ။
ငါပေးခဲ့သည့်အခြားနည်းလမ်းမှာ Yast အပလီကေးရှင်းကို သုံး၍ သင်စနစ်အမျိုးအစားနှင့် / etc / sysconfig သို့သွားသည်။ အားလုံးဂရပ်ဖစ်ပိုင်းအရ၊ သင် Kernel Desktop ကိုသွင်းပြီးပါက၎င်းသည်သင့်အတွက်မလိုအပ်ပါ။
မင်္ဂလာပါပေတရု၊ ပြproblemနာဖြေရှင်းလိုက်ပြီ။ သင်၏အကြံဥာဏ်ကြောင့် BIOS သို့ကျွန်ုပ် USB port များမ ၀ င်ပါ။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကို enable လုပ်လိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်နှိပ်လိုက်သမျှကိုသူအသိအမှတ်ပြုပြီးပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။
Canary Islands မှပွေ့ဖက်ခြင်း။ (စပိန်)
ကြိုဆိုပါတယ်သူငယ်ချင်း၊ ငါတို့ဒီမှာရှိနေတာ :)
ယနေ့ပရာ့ဂ်မှ (ယနေ့မဂ်ဂိုလ် (စပိန်) မှယနေ့မင်္ဂလာပါ)
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၁၃.၂ ကို Intel dual-core၊ 13.2gb ram, rtl4 ကိုစမ်းသပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ Ubuntu, Fedora, Mint ကိုစမ်းပြီးပါပြီ။ အခုတော့ Open Suse ကိုပထမဆုံး install လုပ်တဲ့အချိန်မှာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှုကွန်ယက်က iw ကိုတပ်ဆင်ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုမရှိသောကြောင့် Wi-Fi နှင့် ချိတ်ဆက်၍ မရပါ၊ Yast မှတဆင့်တပ်ဆင်ထားသော Pendrive မှတပ်ဆင်ပြီးပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။
ဒီဟာက KDE desktop အတွက်လိုအပ်တဲ့ကုဒ်တွေပါ။
ပတ် ၀ န်းကျင်အားလုံးအတွက် ...
Cristian Rengifo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ အဲဒါကို code နဲ့လုပ်ဖို့လိုပါသလား။ OpenSuse 13.2 ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီး updates mode ကို install လုပ်ဖို့ graph mode မှာပေါ်လာပါပြီ။ သင့်ရဲ့အဖြေကိုစောင့်နေတဲ့ Install ကိုကျွန်တော်မနှိပ်လိုက်ပါ။
Cristian Rengifo အားပြန်ပြောပါ
console နှင့် Yast နှစ်ခုစလုံးကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော် console သည်အချိန်နည်းသည်။
အလွန်ကောင်းသောနည်းပြဆရာ !! အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် !!
ရပါတယ် :)။ ဝမ်းသာပါတယ်။
gonzalezmd (# Bik'it Bolom #) ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပါတယ်, လမ်းညွှန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်္ဂလာပါ
gonzalezmd ကိုပြန်သွားပါ (# Bik'it Bolom #)
ကြိုဆိုပါတယ် .. .. ၀ မ်းသာပါသည်
လတ်ဆတ်သောတပ်ဆင်မှုတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ရန် 810 packets !!!!
မြင်ရဘယ်မှာ ... ။ !
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းဒီဗားရှင်းကိုဗားရှင်း ၁၁.၀ လိုအွန်လိုင်းမှာတင်နိုင်တယ်
၃၂ bit http://download.opensuse.org/distribution/13.2/iso/openSUSE-13.2-NET-i586.iso
၃၂ bit http://download.opensuse.org/distribution/13.2/iso/openSUSE-13.2-NET-x86_64.iso
Juan Carlos FERRER ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် opensuse 13.2 ကို install လုပ်ထားပြီးပြီဆိုလျှင် crontab နှင့်အလုပ်တစ်ခုစီစဉ်လိုသည်။ သို့မှသာ၎င်းကိုအလိုအလျောက်ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ubuntu နှင့်အခြား opensuse ၏မူကွဲများနှင့်ပြုလုပ်ပြီးပြီဖြစ်သော်လည်းဤဗားရှင်းတွင်၎င်းသည်ငါ့ကိုမ run လိုပါ။ အောက်ပါလုပ်ရိုးလုပ်စဉ် -
20 20 *0* init XNUMX
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်းငါ ၈:၂၀ မှာနေ့တိုင်းပိတ်ဖို့ပရိုဂရမ်သွင်းခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဝါကျကိုတော့မသတ်ခဲ့ဘူး။
Juan CARLOS FERRER သို့အကြောင်းပြန်ပါ
20 20 * * * shutdown ချယခု
20 20 * XNUMX * poweroff
Windows 8 နဲ့ opensuse ကို install လုပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် usb ကနေ install လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး။ ငါဖတ်ပြီးသောအခါငါ install လုပ်ဖို့စနစ်၏ iso image ကိုအတူဖြစ်သင့်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်ငါက "bootable" usb ကိုရှေးခယျြ, ဒါကြောင့်နေဆဲတိကျတဲ့တည်နေရာအဘို့အကြှနျုပျကိုမေးမွနျးတဲ့ disk ကိုရွေးချယ်ဖို့ငါ့ကိုမေးတယ်တဲ့အချက်ရှိပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောလမ်းကြောင်းနှင့် ဘာတွေထည့်ရမည်ကိုမသိပါ
USB ကို Uufi option နှင့်အတူ "rufus" program ဖြင့် mount လုပ်သည်။ အကယ်၍ သင်တပ်ဆင်မည့်သင် disk ကိုထားခဲ့ပါ။ ငါပြproblemsနာမရှိဘူး အရင်တုန်းကတခြားအစီအစဉ်တွေနဲ့ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်။
Live usb ကိုပြင်ဆင်ပါ။
Installation tutorial (၁၃.၂ (သို့) Tumbleweed သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်):
အားလုံးမင်္ဂလာပါ!!! ငါဒီ linux အတွက်အသစ်အဆန်းဖြစ်နေပြီးအသံနဲ့ပြaနာရှိနေတယ်။ ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့အသံကဒ်ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ usb sound card ရှိတယ်။ ALSA နှင့်အတူအသံသည်နှစ် ဦး စလုံးနှင့်အဆင်ပြေသော်လည်းမိုက်ကရိုဖုန်းဆက်သွယ်မှုသည်အယ်ဆာနှင့်သာအလုပ်လုပ်သည်။ ငါ WIFISLAX ကိုသုံးပြီးအသံနှင့်မိုက်ကရိုဖုန်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Alsa ကိုအသံမောင်းသူအဖြစ်ယူဆောင်လာသည်။ သို့သော် Pulse ရှိသည့်အခြားဖြန့်ဖြူးမှုများနှင့်အတူမိုက်ကရိုဖုန်းသည်ငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် PULSE မှ ALSA သို့ပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်ကိုပြောပြပါကသင့်အားကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်သင်မည်သည့်အဖြေတစ်ခုမှမသိဘူးဆိုရင်၊ ငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။
TOR မှဖေ့စ်ဘွတ်ခ်။ ရှင်းပြချက်တစ်ခုရှိတယ်။
openSUSE Tumbleweed သည် Rolling Release ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။